led point ရင်းမြစ်များသည်အဘယ်ကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရသနည်း။
LED point light ၏ထူးခြားချက်များ - ၁။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - ကြော်ငြာအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှင့်ရန်၊ ကြော်ငြာဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ရန်နှင့်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာများကိုအလိုအလျောက်အစားထိုးရန် LED point light light နှင့် LED display screen နှစ်ခုလုံးကိုကွန်ပျူတာမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ LED မျက်နှာပြင်သည် ...
အဘယ်အရာကို ဦး ဆောင် linear အလင်းအိမ်နှင့် guardrail ပြွန်ဘုံ၌ရှိသနည်း
ပထမအချက်အနေဖြင့်၊ အပူဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အမှန်မှာ၊ မီးများနှင့်မီးအိမ်များတွင်အပူလွန်ကဲခြင်းကိုနားမလည်သောလူများစွာရှိပါသည်။ လူအများစုကအခွံကိုထိကြသည်။ ထို့နောက်ဥခွံသည်ပူသည်ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်မသင့်လျော်သောအဖြေဖြစ်သည်။ ပူသည်ဖြစ်စေမသည်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးအဖြေမှာကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်လည်း LED မီးမောင်းထိုးသို့မဟုတ် LED မီးမောင်းထိုးခေါ်နိုင်ပါတယ်။ LED floodlights ကို built-in ချစ်ပ်တစ်ခုကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ အခုတော့ရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပြီ။ တစ်ခုမှာ power chips ပေါင်းစပ်ပြီးအခြားတစ်မျိုးသည်စွမ်းအင်မြင့်ချစ်ပ်တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုသည်။ နှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ယခင်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည် ...
တကယ်တော့ LED လမ်းမီးများအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့ကိုစီမံစရာမလိုပါ။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသာကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သောအချိန်ကိုအာမခံနိုင်သည်။ LED прожекторများအတွက်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုစဉ်မီးခွက်များကိုသန့်ရှင်းပါ။ အဓိကတာဝန်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်မှုန့်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အတွင်း ...
led line light အမှတ်တံဆိပ်သည်အဘယ်ကြောင့်အလင်းရင်းမြစ်၏ထိရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်သင့်သနည်း။
LED မီးအလင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဟိုတယ်၏ညပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး ကိုညအချိန်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်နေ့အချိန်တွင်ထင်ဟပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အရောင်အသွေးနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပြသပြီးဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ 1, ထိရောက်မှုထိရောက်စွာအာရုံစိုက်ပါ ...
LED linear အလင်းအိမ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကော?
အဆိုပါ LED linear မီးခွက်သည် LED wall washer series aluminium profile lamp body ဖြစ်သည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးပေါ့ပါးသည့်အဖုံးနှင့် mounting bracket များသည်ရေစိုခံ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖိအားမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်သည့်မြင့်မားသောအပူခံနိုင်သည့်ဆီလီကွန်ရာဘာတံဆိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မီးခွက်များသည် ... ဖြစ်နိုင်သည်
LED point light source ဆိုတာဘယ်လိုအလင်းမျိုးလဲ။
LED point light ရင်းမြစ်သည်ပုံစံသစ်အလင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် linear light ရင်းမြစ်နှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ pixel color mixing မှတဆင့်အစက်နှင့်မျက်နှာပြင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိသော display ဖန်သားပြင်၏အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များကိုအစားထိုးနိုင်သော Smart lamps ။ LED အချက်ပြမီးသည် ...
LED wall washer ၏နည်းပညာနိယာမကဘာလဲ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း LED နံရံကပ်အဝတ်လျှော်စက်များကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာ - ကုမ္ပဏီနှင့်ကော်ပိုရိတ်အဆောက်အ ဦး များ၏နံရံအလင်းရောင်၊ အစိုးရအဆောက်အအုံများ၏အလင်းရောင်၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၏နံရံအလင်းရောင်၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်အကွာအဝေးကိုလည်းပိုမိုကျယ်ပြန်တိုးပွားလာသည်။ မှ...
ပြင်ပအဆောက်အ ဦး များ၏အလင်းရောင်ကိုမြို့တော်သို့အဘယ်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ခဲ့သနည်း။
အဆောက်အ ဦး အလင်းရောင်စီမံကိန်းကဘာလဲ? အဆောက်အ ဦး အလင်းရောင်ကဘာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီလဲ။ လူများနေထိုင်၊ စားသောက်၊ နေထိုင်၊ ခရီးသွားသည့်မြို့တစ်မြို့တွင်အဆောက်အအုံသည်လူ၏အရိုးစုနှင့်မြို့၏သွေးထွက်သံယိုညဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးမြို့၏လည်ပတ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလမ်းကြောင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အဓိကသော့ချက်တစ်ခုအနေနှင့် ...
LED အလင်းထုတ်ကုန်များ - အပူဖြန်၏ပြိုင်ဘက်?
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း LED chip နည်းပညာအလျင်အမြန်တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ LEDs များကိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရင့်ကျက်လာသည်။ LED ထုတ်ကုန်များသည်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၊ မြင့်မားသောအလင်းတန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်မှုများကြောင့်“ အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များ” ဟုလူသိများသည်။
Lighting Quality ဆိုသည်မှာ light source သည် visual function၊ အမြင်အာရုံသက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အမြင်အာရုံအလှအပစသည့်အလင်းရောင်ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုရည်ညွှန်းသည်။ အလင်းအရည်အသွေးညွှန်းကိန်းများကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အလင်းရောင်နေရာအထူးသဖြင့် LED အလင်းရောင်တွင်အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုရရှိစေလိမ့်မည်။
လက်ရှိအနေအထား - Austech Lighting> News Center> LED point light အမျိုးအစားဆိုတာဘာလဲ။ LED point light source ဆိုတာဘယ်လိုအလင်းမျိုးလဲ။ LED point light အရင်းအမြစ်သည်အလှဆင်မီးအိမ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် linear light source နှင့် flood lighting အားဖြည့်စွက်သည်။ တတ်နိုင်သည့်စမတ်မီးအိမ်များ ...
DJ Lights, pixel အလင်းကို Led, အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာ Led အလင်းရောင်, စင်မြင့်မီး, DJ Facade Led Lights, 3d Led Tube,
led light သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်များရှိသနည်း။
အဘယ်အရာကို linear အလင်းအိမ်နှင့် guardrail t ကို ဦး ဆောင်သလဲ ...
LED ၏လျှောက်လွှာအခြေအနေကဘာတွေလဲ ...
ဘာကြောင့် led line light အမှတ်တံဆိပ်သည် ...